Ikhabhathi ye-Bedside G-6
I-G-6 Itafile yokusebenzela enentsimbi engenasiseko kunye nesiseko se-G-6 ubungakanani: L1500 * W700 * H800mm eyona nto iphambili: 1. ukwakhiwa kwentsimbi edityanisiweyo ngomphezulu wesinyithi kunye nesiseko; 2. Iidrowa ezintathu eziphathwe ngesandla, zekomityi ezimbini ezinezitshixo
Ikhabhathi ye-Bedside G-19
Ikhabhathi ye-G-19 2-yeminyango yecwecwe yekhabhathi yentsimbi engenasiseko G-19 Ubungakanani: L960 * W400 * H1750mm ophambili: 1. i-epoxy yentsimbi edityanisiweyo yolwakhiwo lwesiseko sesinyithi; 2. Iingcango ezimbini zeglasi ezitshixwayo, kunye neishelufa ezinokutshintshwa ezihlanu
Ikhabhathi ye-Bedside G-9
Ikhabhathi ye-G-9 yecwecwe yensimbi engenasiphene, uhlobo I G-9 Ubungakanani: L960 * W400 * H1750mm ophambili: 1. Ulwakhiwo lwensimbi engenasici; 2. Icandelo elingaphezulu elineminyango emibini yeengcango ezivaliweyo, kunye namashelufa amathathu anokutshintshwa; 3. Icandelo elisezantsi ligcina indawo enkulu evaliweyo
Ikhabhathi ye-Bedside D-13
I-D-13 Phenolic yecala lokulala ecaleni kwekhabethe D-13 Ubungakanani: 480 * 470 * 780mm Iimpawu eziphambili: 1. Izinto zobunjineli bobuchule 2. Ngebhodi enye yokutya, idrowa enye, ucango oluncinci olu-3.
Ikhabhathi ye-Bedside D-14
I-D-14 Phenolic yecala lokulala ecaleni kwekhabethe D-14 Ubungakanani: 480 * 470 * 780mm Iimpawu eziphambili: 1. Izinto zobunjineli bobuchule 2. Ngebhodi enye yokutya, idrowa enye, ucango oluncinci olunye
IABS kunye nekhabhathi yensimbi (kunye nabasasazi)
Ikhabhathi yebhedi esecaleni ngensimbi engenasiseko kunye nesiseko